श्रीलंकामा नयाँ प्रधानमन्त्री - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल || 13 May, 2022
शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा थकित छन् युक्रेनी
युद्ध अन्त्यको विषयमा रूसी राष्ट्रपति पुटिन के भन्छन् ?
प्रदूषणका कारण भारतमा सन् २०१९ मा २३ लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । ल्यान्सेटले गरेको
‘मेरो बुवाले मलाई प्रश्न सोध्न सिकाउनुभयो त्यसले मलाई खगोलविद् बनायो’ (भिडियो पनि)
वैज्ञानिक डा. श्वेता शाह युरोपियन स्पेश एजेन्सीको सबैभन्दा ठूलो अन्तरिक्ष मिसन लिजामा कार्यरत खगोलविद् हुन् । उनी विगत ६ वर्षदेखि
७० वर्षयताकै सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक संकट सामना गरिरहेको श्रीलंकामा पेट्रोल हाहाकारको अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघले यस्तो
विवाह गरेको ६ वर्षपछि पनि नातिनातिना नजन्माएको भन्दै भारतको उत्तराखण्डका एक दम्पतीले आफ्नो एक मात्र छोरा र बुहारीविरुद्ध मुद्दा हालेका